အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ခြေစွမ်းကတော့ ရပ်တန့်လို့ မရတော့ပါဘူး
သမိုင်းတွင်မယ့် စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုကို အာဆင်နယ် အရယူနိုင်မလား
26 Oct 2018 . 11:22 AM
အာဆင်နယ်အသင်းကို တားဆီးမယ့်သူ မရှိတော့ဘူးလား။ ဂန္ထ၀င်နည်းပြကြီး အာစင်ဝင်းဂါး Arsene Wenger မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ Captain မရှိတော့တဲ့ သင်္ဘောတစ်စင်းလို ပရမ်းပတာဖြစ်သွားမယ်လို့ ထင်မှတ်ခဲ့သူတွေက အများအပြားပဲ။ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်သစ် အူနိုင်းအမ်မရီ Unai Emery ဖြစ်လာပေမယ့် သူ့ကို စောင့်ကြိုနေတဲ့ သံသယမျက်လုံးတွေ၊ ဖိအားတွေကလည်း အများကြီး။
ရာသီအစမှာ မန်စီးတီး၊ ချယ်လ်ဆီးတို့ကို (၂)ပွဲဆက် ရှုံးခဲ့လို့ အာဆင်နယ် ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်တောင် နပ်မမှန်နိုင်တော့ဘူးလို့ အာဆင်နယ်ပရိသတ်တချို့ကိုယ်တိုင် ယူဆခဲ့ကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရာသီအစ (၂)ပွဲဆက် ရှုံးပြီးကတည်းက Gunners တို့ ရှုံးပွဲအရသာကို နောက်ထပ် မမြည်းစမ်းရတော့ဘဲ တောက်လျှောက် နိုင်ပွဲဆက်ခဲ့တယ်။ မနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ စပို့တင်းလစ္စဘွန်းနဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ အာဆင်နယ်အသင်း ပြိုင်ပွဲစုံ (၁၁)ပွဲဆက်အနိုင်မှတ်တမ်းကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီ။ ဒါဟာ တကယ့်ကို ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်သလို ၂၀၀၇ ၊ အောက်တိုဘာတုန်းက (၁၂)ပွဲဆက် အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း သူတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး မှတ်တမ်းလို့ ဆိုရမယ်။
နောက်ထပ် ဂုဏ်ယူစရာက အာဆင်နယ်အသင်းဟာ အခုပွဲမတိုင်ခင် ပေါ်တူဂီမြေမှာ ကစားခဲ့တဲ့ (၆)ပွဲစလုံး နိုင်ပွဲမရခဲ့ဘဲ (၃)ပွဲသရေ၊ (၃)ပွဲရှုံးပြီး ဒီပွဲမှ အနိုင်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ အခုဆိုရင် အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် သမိုင်းတွင်မယ့် စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုကလည်း စောင့်ကြိုနေပြီ။ အဲဒါကတော့ ကလပ်စံချိန်တင်ဖြစ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံ (၁၄)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲမှတ်တမ်း ပြန်လည်ရယူနိုင်မလားဆိုတာပါပဲ။
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ၁၉၈၇ စက်တင်ဘာ (၁၂)ရက်ကနေ နိုဝင်ဘာလ (၁၁)ရက်အထိ ပြိုင်ပွဲစုံ (၁၄)ပွဲဆက် အနိုင်ရခဲ့ပြီး ကလပ်စံချိန် တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ လာမယ့် (၃)ပွဲမှာ ပဲလေ့စ်(ပရီးမီးယားလိဂ်-အဝေး)၊ ဘလက်ပူးလ် (လိဂ်ဖလား-အိမ်)၊ လီဗာပူးလ် (ပရီးမီးယားလိဂ်-အိမ်)တို့နဲ့ ဆုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး လီဗာပူးလ်တစ်သင်းကိုပဲ ခက်ခက်ခဲခဲ ရင်ဆိုင်ရမယ့်အနေအထားပဲ။ အဲဒီ(၃)ပွဲပြီးရင် စပို့တင်းလစ္စဘွန်းနဲ့ အိမ်ကွင်း ပြန်ကစားရမှာဖြစ်လို့ လီဗာပူးလ်ကိုသာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ရင် စံချိန်သစ်နိုင်ဖို့ သေချာသလောက်ရှိသွားပြီ။ ကဲ .. Gunners ပရိသတ်ကြီးရေ .. အာဆင်နယ်အသင်း သူတို့ရဲ့ ခြေစွမ်းကောင်းကို ဆက်ထိန်းပြီး စံချိန်သစ်တင်နိုင်မလား၊ လာမယ့်ပွဲတွေမှာ ခြေချော်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား . . .
သမိုငျးတှငျမယျ့ စံခြိနျမှတျတမျးကောငျးတဈခုကို အာဆငျနယျ အရယူနိုငျမလား
အာဆငျနယျအသငျးကို တားဆီးမယျ့သူ မရှိတော့ဘူးလား။ ဂန်ထဝငျနညျးပွကွီး အာစငျဝငျးဂါး Arsene Wenger မရှိတော့တဲ့အခြိနျမှာ အာဆငျနယျအသငျးဟာ Captain မရှိတော့တဲ့ သင်ျဘောတဈစငျးလို ပရမျးပတာဖွဈသှားမယျလို့ ထငျမှတျခဲ့သူတှကေ အမြားအပွားပဲ။ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ပဲ့ကိုငျရှငျသဈ အူနိုငျးအမျမရီ Unai Emery ဖွဈလာပမေယျ့ သူ့ကို စောငျ့ကွိုနတေဲ့ သံသယမကျြလုံးတှေ၊ ဖိအားတှကေလညျး အမြားကွီး။
ရာသီအစမှာ မနျစီးတီး၊ ခယျြလျဆီးတို့ကို (၂)ပှဲဆကျ ရှုံးခဲ့လို့ အာဆငျနယျ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့တောငျ နပျမမှနျနိုငျတော့ဘူးလို့ အာဆငျနယျပရိသတျတခြို့ကိုယျတိုငျ ယူဆခဲ့ကွတယျ။
ဒါပမေဲ့ ရာသီအစ (၂)ပှဲဆကျ ရှုံးပွီးကတညျးက Gunners တို့ ရှုံးပှဲအရသာကို နောကျထပျ မမွညျးစမျးရတော့ဘဲ တောကျလြှောကျ နိုငျပှဲဆကျခဲ့တယျ။ မနကေ့ ကစားခဲ့တဲ့ စပို့တငျးလစ်စဘှနျးနဲ့ ယူရိုပါလိဂျပှဲမှာ အနိုငျရခဲ့ပွီးနောကျမှာတော့ အာဆငျနယျအသငျး ပွိုငျပှဲစုံ (၁၁)ပှဲဆကျအနိုငျမှတျတမျးကို ပိုငျဆိုငျခဲ့ပွီ။ ဒါဟာ တကယျ့ကို ဂုဏျယူစရာကောငျးတဲ့ မှတျတမျးတဈခုဖွဈသလို ၂၀၀၇ ၊ အောကျတိုဘာတုနျးက (၁၂)ပှဲဆကျ အနိုငျရခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး သူတို့ရဲ့ အကောငျးဆုံး မှတျတမျးလို့ ဆိုရမယျ။
နောကျထပျ ဂုဏျယူစရာက အာဆငျနယျအသငျးဟာ အခုပှဲမတိုငျခငျ ပျေါတူဂီမွမှော ကစားခဲ့တဲ့ (၆)ပှဲစလုံး နိုငျပှဲမရခဲ့ဘဲ (၃)ပှဲသရေ၊ (၃)ပှဲရှုံးပွီး ဒီပှဲမှ အနိုငျရခဲ့တာလညျးဖွဈတယျ။ အခုဆိုရငျ အာဆငျနယျအသငျးအတှကျ သမိုငျးတှငျမယျ့ စံခြိနျမှတျတမျးကောငျးတဈခုကလညျး စောငျ့ကွိုနပွေီ။ အဲဒါကတော့ ကလပျစံခြိနျတငျဖွဈတဲ့ ပွိုငျပှဲစုံ (၁၄)ပှဲဆကျ နိုငျပှဲမှတျတမျး ပွနျလညျရယူနိုငျမလားဆိုတာပါပဲ။
အာဆငျနယျအသငျးဟာ ၁၉၈၇ စကျတငျဘာ (၁၂)ရကျကနေ နိုဝငျဘာလ (၁၁)ရကျအထိ ပွိုငျပှဲစုံ (၁၄)ပှဲဆကျ အနိုငျရခဲ့ပွီး ကလပျစံခြိနျ တငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အာဆငျနယျအသငျးဟာ လာမယျ့ (၃)ပှဲမှာ ပဲလစျေ့(ပရီးမီးယားလိဂျ-အဝေး)၊ ဘလကျပူးလျ (လိဂျဖလား-အိမျ)၊ လီဗာပူးလျ (ပရီးမီးယားလိဂျ-အိမျ)တို့နဲ့ ဆုံတှရေ့မှာဖွဈပွီး လီဗာပူးလျတဈသငျးကိုပဲ ခကျခကျခဲခဲ ရငျဆိုငျရမယျ့အနအေထားပဲ။ အဲဒီ(၃)ပှဲပွီးရငျ စပို့တငျးလစ်စဘှနျးနဲ့ အိမျကှငျး ပွနျကစားရမှာဖွဈလို့ လီဗာပူးလျကိုသာ ကြျောဖွတျနိုငျခဲ့ရငျ စံခြိနျသဈနိုငျဖို့ သခြောသလောကျရှိသှားပွီ။ ကဲ .. Gunners ပရိသတျကွီးရေ .. အာဆငျနယျအသငျး သူတို့ရဲ့ ခွစှေမျးကောငျးကို ဆကျထိနျးပွီး စံခြိနျသဈတငျနိုငျမလား၊ လာမယျ့ပှဲတှမှော ခွခြေျောမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျလား . . .